Hay’addaha qaramada midoobe oo kahadlay qatar ka dhalan karta xaalada Abaarta Somaliya – STAR FM SOMALIA
Hay’addaha qaramada midoobe oo kahadlay qatar ka dhalan karta xaalada Abaarta Somaliya
Hay’addaha UNICEF iyo WFP ee Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo caruurta ayaa ka digay inay kasii darto abaarta ka jirta Somaliya, haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad loo sameyn.
Qoraal ay soo saareen Hay’adahan ayeey ku sheegeen in dadka Somaliyed badi ay haatan la il daran yihiin biyo la’aan iyo sidoo kale cunto yari baahsan.
Gurmad loo sameeyo dadka abaarta ku hayso Somaliya ayeey sheegeen inay tahay mid haatan aad u muhiim ah, islamarkaana haddii hadda aan deg deg wax loo qaban laga yaabo in xaaladda ay ka darto sida ay haatan tahay.
Kala bar dadka ku nool Somaliya ayaa la sheegay inay haysato badbaado la’aan cunto, iyo waliba baahi laga taageero hab nololeedkooda.
Warbixinta ay hay’adahan soo saareen ayaa sidoo kale lagu sheegay 949 kun oo caruur ah in sanadkaan la filayo inay galaan xaalad nafaqao darro ah, iyadoo 185 kun oo ka mid ah carruurtaasi ay wajahayaan sida la sheegay nafaqo darro aad u daran, waxayna u badan tahay baa la yiri in tirada carruurtaasi ay sii kororto 50% bilaha nagu soo aadan.
WFP iyo UNICEF ayaa sheegtay inay jirto fursad aad u yar oo looga weecdo musiibadan, iyaga oo tilmaamay inay ku dadaali doonaan in kaalmo ay ka bixiyaan deegaannada daran ee abaartu ka jirto.
Gobolo badan oo dalka ka mid ah waxaa ka jirta abaar baahsan oo sameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada.
Puntland oo soo bandhigtay tirada kiisaska kufsiga ee ka dhacay deeganadeeda(DHAGEYSO)
Tiro Madaafiic ah oo goordhaw lagu garaacay Villa Somalia.